May Nyane: မိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင်
အန်တီရေ...အဲဒီခေတ်က တက္ကသိုလ်ကို တက်ဖူးချင်လိုက်တာ...
ညီမလဲ ရာသီတိုင်းကို ချစ်တယ်။ သဘာဝအလှအားလုံးကို ခံစားတတ်တယ်။ အမနဲ့ တူပြန်ပြီနော်။
မိုးကတော့ ကိုယ်မွေးတဲ့ ရာသီမို့လားမသိ၊ ပိုပြီးသဘောကျတာ။
ညီမက မိုးရဲ့ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာမွေးတာလေ။
အမပြောတဲ့ ခရမ်းပြာကို မရောက်ဖူးခဲ့ဘူး။ အဲဒီအနုပညာရှင်တွေကို မြင်ဖူး တွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ။ အရင်တုန်းက အဲဒီလို အနုပညာသမားတွေ စာပေနယ်က လူတွေကို မြင်ရလို မြင်ရငြား ၃၃-လမ်းထဲသွားပြီး ရွှေကြည်အေးမှာထိုင်လိုထိုင် လေထန်ကုန်းရှေ့ဖြတ်လိုဖြတ်၊ ဘားလမ်းထဲက ကိုတင်အုန်းအအေးဆိုင် သွားလိုသွား ခဏခဏလုပ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။ သူတို့ကို မြင်နေရရင်ကို ကျေနပ်နေမိတာမို့။
ခိုင်ထူးသီချင်းတွေက ကျောင်းကိုအမှတ်ရစရာနော်။ ခင်ဝမ်းသီချင်းတွေလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်။ အမရဲ့ မိုးဖွဲ့လေးကိုဖတ်ပြီး ကျောင်းကို တော်တော်လွမ်း မိတယ်။ ရန်ကုန်မှာသာ နေပြီး ကျောင်းကို မရောက်ဖြစ်တော့တာကြာပြီ။
အမရဲ့ အဖေ သတိတရ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးက စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ သမိုင်းတွေအများကြီး ကျောင်းရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ရှိနေတယ်နော်။
ဘာလိုလိုနဲ့ ဇူလိုင် ၇ တောင် နီးလာပြီပဲ။
ကျောင်းရဲ့ အရိပ်က မက်စရာပါပဲ။
အမ ရှေ့လကျရင် ၇ဇူလိုင်အတွက်
အဲဒီတုန်းက ကျောင်းထဲက ကဗျာတွေ
I hope and secretly pray that Yangon University and Judson church will be like this again for students. Or am I just dreaming?
အာရ်စီတူး ကနေ လှည်းတန်း ကိုအမြဲလမ်းလျှောက်၊လှည်းတန်းကမှ ဘတ်(စ)ကားစီးတတ်တာမို့ အဲဒိခရမ်းပြာလေးကို အမြဲ မြင်ယောင်လွမ်းနေတာပါ။
အစ်မရဲ့ ဘူမိဗေဒ အတန်းက လက်ချာတွေ ကျွန်တော်လာလာနားထောင်ဖူးတယ်..
၂၀၀၄ ခုနှစ် ပြန်ရောက်တုန်း က မိန်း ကတော့ တရားရိပ်သာ ကလေးနဲ့ တူနေပြီ။
ကျွန်တော်လဲ အာရ်စီတူး၊ မိန်း နဲ့ ကျောင်းနောက်ခံ လေးနဲ့ ဝတ္ထု အရှည်ကြီး ရေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်း မှာ ပုံနှိပ်ချင်တဲ့ အိမ်မက် ကြောင့်် အကြမ်းအဆင့်က မတတ်သေးဘူး…
အဲ ပန်ဒိုရာက အဲဒီလောက်တော့ မစောဘူးပေါ့လေ..
လွမ်းလိုက်တာ လွမ်းလိုက်တာ လွမ်းလိုက်တာ..
အဲဒီအပြင် ထပ် မပြောပြတတ်တော့ဘူး..
ကိုယ့်အိမ်လို နေခဲ့ရတဲ့ နေရာ….
ရှင်က တခွန်းထဲနဲ့ ပြောသွားတာ။
ကိုယ့်အိမ်လို နေခဲ့ရတဲ့ နေရာ။
“ ရဲရင့်..ကျောက်ခက်တို့ ဖြိုနေဆဲ.. ငါ့စိတ်တွေ နှင်နေတုန်းပေါ့..တချို့တွေ နေနိုင်လွန်းတယ်… ”
ဆရာမမေငြိမ်းရေ အဲဒီသီချင်းလေးက ကိုနေ၀င်း သီချင်းလေးပဲလား။ ခိုင်ထူးဆိုတာပဲလားမသိဘူး။ စာသားတွေ ကြားဘူးနေလို့ သိချင်လို့ပါ။
ဆရာမရေ ကိုနေ၀င်းရဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်မက် စာသားတွေကို နားမထောင်ဘူးပဲ သိနေပါတယ်လို့၊ မနေ့ညကမှ ဆရာမဂျူး ရဲ့ အမှတ်တရ ထဲကဆိုတာ ပြန်သတိရတော့တယ်။ စုစုထွေးက သူ့မောင်ကို စောင့်ရင်း ဂစ်တာတီးရင် ဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းလေးလေ။ :)
when i read this article, my eye become wet. I was Thiri Thu and my 1st year started with 75Ks Noted strike.. so. all sense are coming step by step.
I was so much crazy for your first novel 'thichin nyinsi'. I'd like to read it again.
အမနဲ.ခံစာချက်ချင်းတော်တော်တူပါတယ်။ အမနဲ.ကျောင်းေ၇ာက်တဲ.နှစ်တူလောက်တယ် ၈၂မှာစက်မှုတက္ကသိုလ်စေ၇ာက်တယ် မေတ္တာ